Mukhtaar Roobow & Xasan Daahir Aweys oo kullan qarsoodi ah yeeshay (Maxay ka wada hadleen Akhriso) | Allbanaadir News	Mukhtaar Roobow & Xasan Daahir Aweys oo kullan qarsoodi ah yeeshay (Maxay ka wada hadleen Akhriso)
Mukhtaar Roobow & Xasan Daahir Aweys oo kullan qarsoodi ah yeeshay (Maxay ka wada hadleen Akhriso)
War hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in Wadaadka Wada hadalka kula jira Dowladda Federaalka Soomaaliya Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur uu magaalada Muqdisho kula kulmay Sheikh Xasan Daahir Aweys oo xabsi guri ku jira.
Warkaan oo aan ka helnay illo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya,ayaa ku waramaya in Labada Wadaad ay ka hadleen Xaaladda Soomaaliya iyo sida loo taageeri lahaa Dowladda Farmaajo oo hadda dagaal adag kula jirta Al-Shabaab.
Mukhaar Roobow iyo Xasan Daahir Aweys oo mar ka wada tirsanaan jiray Ururada Islaamiga ee dalka soo maray gaar ahaan Al-Shabaab ayaa hadda fekerkooda wax badan iska bedelay,iyagoo isku soo dhiibay Dowladda Federaalka,balse Xasan Daahir Aweys ayaa muran badan uu ka taagan yahay mowqifkiisa Al-Shabaab,inkastoo marar badan muuqaal uu ku dhaliilayo ficiladooda uu soo duubay.
Mukhtaar Roobow oo Xasan Daahir Aweys salaam ugu tagay Guriga uu ka degan yahay Muqdisho gaar ahaan madaxtooyada Soomaaliya ayaa sida wararka aan ka heleyno waxay is aragooda kaga arinsadeen arrimo badan oo xaaladda Soomaaliya ku saabsan iyo sida jiilka danbe loogu dhiiri gelin karo iney hagaagsadaan dalkooda.
Xasan Daahir Aweys oo ah wadaad mayal adag ayaa aad ula dhacsn Dowladda Farmaajo,isagoona marar badan ugu duceeyay inuu Alle la garab galo howsha adag ee dalka u hayo.
Waa kullankii ugu horeeyay oo Labada Wadaad ay yeeshaan tan iyo markii ay ka soo wada baxsadeen Kooxda AL-Shabaab.